Ngaba Ndikulungele Ukushiya Ikhaya? | Ulutsha Luyabuza
Yintoni eyona nto ndifuna ukuyenza?
Injongo kaThixo yayikukuba abantwana bakhule, bashiye abazali babo baze bazakhele ezabo iintsapho. (Genesis 2:23, 24; Marko 10:7, 8) Kodwa ungayazi njani xa ukulungele nyhani ukulishiya ikhaya? Cinga ngale mibuzo mithathu.
Ziziphi izizathu zam?
Funda ezi zizathu zingezantsi. Zibuze, ‘Ziziphi ezona zizathu zibalulekileyo ezenza ndifune ukuhamba ekhaya?’
Ukubaleka iingxaki zasekhaya
Ukufumana inkululeko engakumbi
Ukufuna ukuhlonelwa ngabahlobo
Ukunceda umhlobo ofuna umntu aza kuhlala naye
Ukuya kusebenza njengetsha-ntliziyo kwenye indawo
Ukungafuni kubhatalelwa yonk’ into ngabazali
Akukho nto imbi ngezi zizathu zichazwe ngasentla. Kodwa yintoni intsusa yoko? Ngokomzekelo, xa uhamba ekhaya kuba ufuna inkululeko, uya kufumana into obungayilindelanga!
UDanielle owakha wemka kowabo eneminyaka eyi-20, wafunda lukhulu kuloo nto. Uthi: “Sonke sifanele sinqandwe kwizinto ezithile. Xa uzihlalela, izinto onokuzenza zilawulwa ngamaxesha akho omsebenzi nokungabi namali. Musa ukubavumela abanye abantu ukuba bakuphembelele ukuba wenze isigqibo ngokungxama.—IMizekeliso 29:20.
Ukuya kuzihlalela kufana nokuhamba entlango—kufuneka wazi iindlela zokuphila ngaphambi kokuba uhambe entlango
Ukuya kuzihlalela kufana nokuhamba entlango. Ngaba ubuya kuya kuloo ntlango ungakwazi ukumisa intente, ukubas’ umlilo, ukupheka okanye ukufunda imaphu? Akunjalo! Sekunjalo, luninzi ulutsha olumka ekhaya lungakwazi kakuhle ukunyamekela ikhaya.
UKumkani uSolomon osisilumko wathi, “onobuqili uyawaqwalasela amanyathelo akhe.” (IMizekeliso 14:15) Ukuze ubone ukuba ukulungele kusini na ukuzihlalela, khawuhlole le mixholo ilandelayo:
Ukuyisebenzisa kakuhle imali: USerena, oneminyaka eyi-19 uthi: “Akuzange kukhe kufuneke ukuba ndizihlawulele nantoni na. Ndiyoyika ukumka ekhaya ndize ndinyanzeleke ukuba ndiqingqe imali endiza kuyisebenzisa.” Unokukufunda njani ukuyisebenzisa kakuhle imali?
IBhayibhile ithi: “Umntu osisilumko uya kuphulaphula aze angenise uyalelo olungakumbi.” (IMizekeliso 1:5) Ngoko ke, unokubuza abazali bakho ngeendleko umntu amele azihlawule kwirenti, indlu, ukutya, imoto nesithuthi sikawonke-wonke. Emva koko, bacele ukuba bakufundise indlela yokuqingq’ imali nendlela yokuhlawula amatyala.
Imisebenzi yasekhaya: UBrian, oneminyaka eyi-17 uthi eyona nto ayoyikayo ngokumka ekhaya kukuba kuza kufuneka azihlambele iimpahla. Unokwazi njani xa sele ukulungele ukuzinyamekela? UAron, oneminyaka eyi-20 ucebisa athi: “Khawukhe uzame ukuphila ngathi uyazihlalela kangangeveki. Yitya kuphela ukutya oziphekele kona, nokuthenge ngemali oyisebenzeleyo. Nxiba iimpahla ezihlanjwe nezolulwe nguwe. Yicoce ngokwakho indlu. Zama ukuziyela kwiindawo ofuna ukuya kuzo kungekho mntu uza kukusa okanye akulande.” Ukulisebenzisa eli cebiso kuya kukunceda kwizinto ezimbini: (1) Uya kuba nobuchule bokwenza izinto ezithile, uze (2) uzixabise ngakumbi izinto abakwenzela zona abazali bakho.
Ukusebenzisana nabanye abantu: Ngaba uyavana nabazali bakho nabantwana bakowenu? Ukuba anivani, usenokucinga ukuba uza konwaba xa uhlala nomhlobo wakho. Kodwa cinga ngoko kuthethwa nguEve, oneminyaka eyi-18: “Abahlobo bam ababini bemka emakhayeni abo baza bahlala kunye. Babengabahlobo abavanayo ngaphambi kokuba bahlale kunye, kodwa kwakunzima gqitha ukuba bahlale bobabini. Omnye wayelihomba, omnye elixelegu. Omnye wayebuxhalabele ubuhlobo bakhe noThixo, ukanti omnye wayengenjalo. Babengavisisani kwaphela!”
Ngoko siyintoni isicombululo kwimeko enjalo? UErin, ona-18 uthi: “Uyakwazi ukufunda ukuhlala nabantu ngoxa usahlala kowenu. Ufunda indlela yokucombulula iingxaki nokuncamela abanye abantu izinto. Eyona nto ndiyiphawuleyo kukuba abo bashiya amakhaya abo kuba bengavani nabazali babo bayazibaleka iingxaki kunokuba bafunde ukuzicombulula.”
Ukuzibekela ixesha lokunqula uYehova: Abanye bayemka ekhaya kuba nje bebaleka izinto zonqulo ezenziwa ekhaya. Abanye bayazimisela ukufunda iBhayibhile baze banqule kodwa ekuhambeni kwexesha baqalisa imikhwa emibi. Unokukuphepha njani ‘ukophukelwa yinqanawa elukholo lwakho’?—1 Timoti 1:19.
Zenzele ucwangciso lokufunda iBhayibhile nokunqula uze unamathele kulo. Unokuzibhalela olwakho ucwangciso kwikhalenda uze ubone enoba unokukwazi kusini na ukululandela kwisithuba senyanga ungakhange ukhunjuzwe ngabazali bakho?
Ngaba ufuna ukumka ekhaya kuba ubaleka iingxaki? Okanye ngaba akusafuni ukuba phantsi kwegunya labazali? Ukuba kunjalo, eyona nto ucinga ngayo zezo ngxaki uzishiya ngasemva negunya labazali kunalapho uya khona. Loo ndlela yokucinga ifana nqwa nokuzama ukuqhuba ujonge isipili esikubonisa ngasemva—ingqondo yakho ikoko ukushiya ngasemva nto leyo ebangela ukuba ungaboni apho uya khona. Yintoni esiyifundayo koku? Ukuze uphumelele, musa ukucinga nje ngokumka ekhaya—cingisisa ngezinto ezibalulekileyo ofuna ukuzenza.
Enoba luyintoni na usukelo lwakho, cingisisa ngaphambi kokuba wenze isigqibo. IBhayibhile ithi: “Amacebo okhutheleyo ngokuqinisekileyo ayingenelo, kodwa wonk’ ubani ongxamayo ngokuqinisekileyo usingisa ekusweleni.” (IMizekeliso 21:5) Liphulaphule icebiso labazali bakho. (IMizekeliso 23:22) Wuthandazele lo mbandela. Njengoko usenza isigqibo, cinga ngemigaqo yeBhayibhile ekuthethwe ngayo kweli nqaku.
Ngoko ke nanku umbuzo obalulekileyo omele uzibuze wona, Ngaba ndingakwazi ukuphatha ikhaya? kunokuba uzibuze oku, Ngaba ndikulungele ukumka ekhaya? Ukuba uyakwazi ukuzinyamekela, mhlawumbi sele ukulungele ukuba uye kuzimela.